I-Smartling: Iinkonzo zokuGuqulela, ukuBambisana, kunye neNkqubo yokuZenzekelayo yeSoftware | Martech Zone
I-Smartling: Iinkonzo zokuGuqulela, ukuBambisana, kunye neNkqubo yokuZenzekelayo yeSoftware
Ukuba urhwebo luqhutywa ngamagama, urhwebo lwehlabathi luqhutywa kukuguqulela. Amaqhosha, iinqwelo zokuthenga, kunye nekopi yothando. Iiwebhusayithi, ii-imeyile, kunye neefom kufuneka ziguqulelwe kwiilwimi ezahlukeneyo ukuze uphawu luhambe kwihlabathi liphela kwaye lufikelele kubaphulaphuli abatsha.
Oku kuthatha amaqela abantu alawula ngocoselelo ijelo ngalinye losasazo lomxholo; kwaye kungabizi mali ininzi kumaqela ukujongana nolwimi ngalunye oluxhaswayo. Ngena: UkuqiqaInkqubo yolawulo lotoliko kunye neenkonzo zeenkonzo zolwimi ezixhobisa iimveliso kunye nezixhobo zokwenza umxholo wasekhaya kwizixhobo nakumaqonga. I-Smartling's Enterprise Translation Cloud, indlela eqhutywa yidatha yokwenziwa kwendawo, ivumela abathengi bayo ukuba bafezekise uguqulo lomgangatho ophezulu ngexabiso eliphantsi.
I-Smartling liqonga lokuguqulela elikhethiweyo kumakhulu eempawu, kubandakanya iHootsuite, iQela leehotele leIntercontinental, iSprout yeNtlalontle, iGoPro, i-Shopify, i-NextDoor, iSlack kunye neSurveyMonkey.
Yintoni eyenza ukuSlingling kwahluke?
Indawo eqhutywa yidatha -Smartling ayibonisi abathengi kuphela ngedatha yexesha lokwenyani malunga nenkqubo yabo yokuguqulela, kodwa ikwanobuchule ngokwaneleyo ukubenzela izigqibo.
into yokuZenzekelayo -Abaphuhlisi abafumaneki kodwa iinguqulelo kufuneka zenziwe. I-Smartling ingenamthungo iqhagamshela kwi-CMS yabathengi, ikhowudi yokugcina, kunye nezixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo ukunciphisa umthwalo wobulali.
Umxholo obonakalayo - Abaguquleli kufuneka babone amagama ngokomxholo ukuze bahambise umsebenzi okwinqanaba eliphezulu. Ngaphandle kwayo, amava omsebenzisi wokugqibela ayasokola. Unxibelelwano loguqulelo lukaSmartling lwenza nawuphi na umguquleli ukuba aqonde iprojekthi esele ikhoyo.
Ukuguqulelwa komatshini weSmartling (MT)
Ayinguye wonke umsebenzi ofuna umguquleli ongumntu. Xa kuziwa ekuguquleleni amagama kwisikali, ukuguqulelwa komatshini yeyona ndlela ikhawulezayo kwaye inexabiso eliphantsi. I-Smartling idibanisa neenjini zeM MT ezinamandla nezingamandla, kubandakanya iAmazon Guqula, iToliki kaGoogle, uMguquleli weMicrosoft, uMguquleli woLwimi lweWatson, nokunye okuninzi, ukunceda abasebenzisi ukuba bafumane inkonzo eyiyo yeMT kwiimfuno zabo ezithile. I-Smartling ikwaphakamisa ukuguqulelwa komatshini we-neural ukulungelelanisa iinguqulelo zomxholo kwilizwi ngalinye elikhethekileyo kwithoni ngokuhamba kwexesha.
IiNkonzo zoLwimi zeSmartling
IiNkonzo zokuTolika zikaSmartling ziguqulela ngaphezulu kwamagama angama-318 ezigidi ngonyaka ukusuka kwizibini ezili-150 zeelwimi. Inkampani inceda ekucokiseni uhambo lwabathengi kuma-50 amashishini ahlukeneyo. ISmartling isebenzisa inkqubo engqongqo yohlolo, ineepesenti ezi-5 kuphela zabafakizicelo abazenzayo, ukuqinisekisa ukuba inkampani ihambisa kuphela abaguquleli abagqwesileyo kwihlabathi liphela. Okanye, ukuba unabaguquleli bakho, unokongeza ngokulula kwiqonga leSmartling nakuhambo lwakho lokuguqulela.
Ngokuthatha indlela ebanzi yokonga iindleko, iiNkonzo zoLwimi zeSmartling zihamba ngaphaya kwamaxabiso okhuphiswano ngegama ngalinye, zinikezela ngeenkqubo zokuguqulela ezakhiwe ngokwesiqhelo ngaphandle kobuncinci beprojekthi, kunye nolona luhlu lubanzi lweendlela zokuguqulela ezinokunciphisa inkcitho yokuguqulela ukuya kuthi ga kuma-50 %.
Inguqulelo ye-Smartling Computer-Assisted
Inkqubo yoqobo yokuguqula yenzeka kanye ngaphakathi kwi-Smartling, ngesixhobo esakhelweyo ngaphakathi seKhompyuter-Uncedo lokuTolika (CAT). Nge-CAT ka-Smartling, uMxholo oBonakalayo uhlala unikezelwa kubaguquleli, ukwenza ukuba abaguquleli baqonde ngokuchanekileyo ukuba ngowuphi umxholo abaguqulelayo, kunye nendlela amagama abo ahambelana ngayo kuloo meko. Nje ukuba uguqulo ngokwalo lugqityiwe, abaguquleli banokuhamba ngokukhawuleza baye kulo msebenzi ulandelayo enkosi kuhambo oluzenzekelayo.
I-Smartling ikwasebenza ukwenza umsebenzi wabaguquleli abangabantu ukuba ubelula ngokulula ngokunjalo, ngenxa:
Umxholo obonakalayo - Abaguquli-mibhalo banokuwuphononongwa kuqala umsebenzi wabo, nakweyiphi na ifomathi
Imemori yeNguqulelo yexesha lokwenyani
Ulawulo lohlobo -Umxholo osanda kulayishwa kuphela ocacileyo kuguqulelo, ngelixa umxholo omdala uguqulelwa kwimemori kaSmartling
Ii-asethi zophawu - Izibonelelo zethoni kunye nezikhokelo zohlobo
Ukuhlolwa koMgangatho oHlangeneyo Ukuvavanywa komgangatho wexesha lokwenyani kunceda ukugcina ixesha lokuvavanywa kwakhona
Izinqamlezo zekhibhodi - Gcina ixesha kwinto nganye oyenzayo
Hlanganisa imitya - Dibanisa iziqendu kunye nesitshixo esinye nje
Ukuphathwa kweTek Flexible -Usebenzisa ukufunda komatshini ukubeka iithegi ngokuchanekileyo
Ukuhamba ngokuzenzekelayo I-Smartling igcina umxholo ushukuma, kwaye ngokuzenzekelayo ihambisa uguqulo olugqityiweyo ukuya kwinqanaba elilandelayo
Ngokudibanisa ngokuthe ngqo kunye neenkqubo ezikhoyo kunye nezixhobo- umzekelo, ukulayisha umxholo kwi-CMS -Smartling yenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukuzenzekelayo yonke inkqubo ejikeleze eyona nguqulelo. I-Smartling iyakwazi ukudibanisa malunga nalo naliphi na iqonga okanye isixhobo isixhobo sakho esele sisebenza:
Umphathi wamava eAdobe
Inkokeli kuguqulelo lwelifu, uSmartling uthimba umsebenzi ngamnye onxulumene nenkqubo yokuguqulela, ukuwenza ukuba abasebenzisi beenkcukacha basebenzise ukuqhuba izinto ezintsha kumashishini abo. Enkosi kuMxholo oBonakalayo kunye noluhlu olomeleleyo lweempawu ezizenzekelayo, abathengi bayazibona iinguqulelo ezingenaxabiso kunye nomgangatho ophezulu, ngexesha elincinci.
Hambisa ilizwe ngamagama
Kulo nyaka, uSmartling wenza ityala elitsha lokuthengisa elibizwa ngokuba yiHambisa uMhlaba ngamagama. Oku kuqale ngombono wokuba kukho abantu ngasemva kwayo yonke into eyenzelwa yinkampani kubathengi: abaguquleli. Ke iqela liqeshe umfoti othathe uhambo lokuya kubhala ubomi kunye namabali abaguquleli abali-12 abahlala kwilizwe lonke. Amabali aphilayo kwi Hambisa iHlabathi ngamagama incwadi yetafile yekofu maneka ngoku.
Iinkampani ezifuna ukukhula kunye nempumelelo yehlabathi ziyaqhubeka ukuthatha umdla omkhulu ekunikezelweni kwethu. Ayisiyiyo kuphela indawo abathengi bethu abatsha abazingca ngayo, kodwa ukunyuka okubaluleke kangaka kwi-NPS kuthetha kanye njengokuba kubonisa ukuba abathengi bethu bangoku banamava eSmartling. Isixelela ukuba siyazizalisekisa izithembiso zethu kubathengi xa kufikwa ekunikezeleni ngamava asemagqabini asendaweni kunye netekhnoloji yokuguqulela kunye nabaguquli abaziyo abathengi bethu kwaye babe lulwandiso lweqela labo. Ngekhe sibekho ngaphandle kwayo.
Umsunguli we-Smartling kunye ne-CEO, uJack Welde
Cwangcisa iDemo yeSmartling
tags: Umphathi wamava eAdobegfpiqonga lokutyibilika jikeleleinguqulelo yabantuibm watsonUmguquli wolwimiukuguqulelwa komatshiniiilwimi ezininziamava endalo brandUlwimi lenkobeulwimi lwendaloinguqulelo yendaloukuqondatranslationisinxibelelanisi sokuguqulaiqonga lokuguqulelaabaguquleli
Phinda uthumele iWindowsPress kwiNtloko